156CM Mara mma llọ Nkịta 168 Mmekọahụ Mmekọahụ Mpaghara
Dollọ Doll Kwesịrị Ekwesị 168 Mara mma 156CM Mmekọahụ Mmekọahụ
Ndị na-emepụta ejiji ga-ejikwa ụmụ bebi ndị a nwalee uwe ha ma hụ otu ha ga-esi lee ndị ezigbo mmadụ anya. Dolmụ bebi na-enwe mmekọahụ na-edozi ọdịiche dị n'etiti echiche efu na eziokwu n'emebighị ụkpụrụ omume ọha na eze. Nke a bụ 156cm ogologo nwa bebi, si na Dollhouse 168 ika. Achọrọ m ka ị họrọ ngwaahịa kachasị amasị gị ebe a. Dolmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ na-akpali ọtụtụ ndị na-ese ihe, ndị na-ese ihe na ndị na-ese foto ka ha nwalee ọrụ dị iche iche. Enwere ụfọdụ ndị na-ese foto na ụmụ bebi mmekọahụ na ahịa ndị rụworo ọtụtụ ọrụ.